Ahoana no hamindra sary avy iPhone ho Mac | avy amin'ny mac aho
Ahoana no hamindra sary avy iPhone ho Mac
Miaraka amin'ny famoahana ny kinova iOS vaovao tsirairay, toy ny amin'ny dikan-teny macOS vaovao tsirairay, avy amin'ny Soy de Mac dia manoro hevitra anao foana izahay manaova installer aloha, aza manavao mivantana ny fitaovana amin'ny dikan-teny efa napetrakay amin'ny solosainay.
Na dia mila fotoana aza ny dingana ary mitaky antsika hamerenana indray ireo rindranasa, io no fomba tsara indrindra ho an'ny iPhone, iPad ary Mac mba hanohy hiasa toy ny andro voalohany. Raha ny iPhone, inona no mitranga amin'ireo sary ananako amin'ny iPhone? Ahoana no hamindra sary avy iPhone ho Mac?
Raha Mac izany dia tsara izany, satria ny fomba mora indrindra hanohanana ny sary rehetra dia Ampifandraiso amin'ny kapila mafy ivelany ary kopia ny atiny rehetra izay notehirizinay tao amin'ny Mac.
Na izany aza, raha iPhone na iPad izany, hafa tanteraka ny zavatra. Na izany aza, raha Mac izany, satria amin'ny Windows dia tsotra kokoa ny dingana. Raha te-hahafantatra ny fomba hamindra sary avy amin'ny iPhone ho Mac, manasa anao aho hanohy hamaky.
Ahoana ny fandefasana sary amin'ny WhatsApp nefa tsy very kalitao
2 Miaraka amin'ny fampiharana Photos
4 Safidy hafa
Ny fomba tsotra, haingana ary mora kokoa ny hamindra sary avy amin'ny iPhone ho Mac dia ny fampiasana ny AirDrop teknolojia Apple. Ny AirDrop dia ahafahantsika mamindra karazana rakitra eo amin'ny fitaovana Apple raha toa ka mifanaraka izy roa.
Ity teknolojia ity mampiasa Wi-Fi (raha misy) sy bluetooth handefasana ny votoaty, noho izany dia avo be ny hafainganam-pandehan'ny famindrana.
Entina mandefa ny atiny amin'ny alalan'ny andian-tsary sy horonan-tsary raha tsy tianay ny Mac sy ny iPhone hieritreritra izay tokony hatao ary farany tsy hamindra na inona na inona.
Na dia efa nisy nandritra ny taona maro aza ity teknolojia ity, dia natao ho an'ny Mac ihany izy io tamin'ny voalohany. Tamin'ny famoahana ny iPhone 5, Apple dia nampiditra ity endri-javatra ity tamin'ny iPhone.
Mba hampiasana AirDrop handefasana sary sy horonan-tsary avy amin'ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny Mac ity tsy maintsy tantanin'ny iOS 8 ary:
iPhone: iPhone 5 na aoriana
iPad: iPad taranaka faha-4 na aoriana
iPad Pro: iPad Pro taranaka voalohany na aoriana
iPad Mini: iPad Mini taranaka voalohany na aoriana
iPod Touch: iPod Touch taranaka faha-5 na aoriana
Ary koa, ny iMac izay handray ny atiny, tsy maintsy tantanan'ny OS X Yosemite 10.10 ary:
MacBook Air manomboka amin'ny tapaky ny taona 2012 na aoriana
MacBook Pro manomboka amin'ny tapaky ny taona 2012 na aoriana
iMac nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2012 na aoriana
Mac Mini nanomboka tamin'ny tapaky ny taona 2012 na taty aoriana
Mac Pro manomboka amin'ny tapaky ny taona 2013 na aoriana
Raha tsy anisan'ny iPhone, iPad, na iPod touch na iray amin'ireo Mac tohana ny fitaovanao, tsy ho afaka hampiasa an'io fiasa io ianao mba hamindra sary avy amin'ny iPhone ho Mac mampiasa AirDrop teknolojia.
Miaraka amin'ny fampiharana Photos
Raha nanao fifanarahana toerana fitehirizana ao amin'ny iCloud Drive izahay, tsy mila manao backup isika amin'ireo sary rehetra notehirizinay tao amin'ny iPhone, iPad na iPod touch, satria voatahiry ao amin'ny rahona Apple ireo. Ireo votoaty rehetra ireo dia azo idirana amin'ny Mac noho ny fampiharana Photos.
Raha tsy manana habaka iCloud fanampiny mihoatra ny 5 GB omen'i Apple ho an'ny mpampiasa rehetra ianao, dia azonao atao ny mampiasa ny fampiharana Photos amin'ny Mac anao. manafatra ny atiny rehetra voatahiry ao amin'ny iPhone, iPad na iPod touch.
Alohan'ny hanatanterahana izany dingana izany dia tsy maintsy manamarina izany isika manana toerana ampy izahay ao amin'ny efitrano fitahirizanay mba hanatanterahana ny dingana.
Raha hampiasa ny app Photos amin'ny Mac-nao mba mamindra sary iPhone, tsy maintsy manao ireo dingana asehoko anao eto ambany izahay:
Ny zavatra voalohany tsy maintsy ataontsika dia ny mampifandray ny iPhone, iPad na iPod touch amin'ny Mac mampiasa ny USB charging cable.
Manaraka, manokatra ny fampiharana izahay Photos amin'ny Mac.
Ao amin'ny fampiharana Photos dia hiseho ny efijery manasa antsika manafatra ny sary ary horonan-tsary izay notehirizinay tao amin'ny iPhone, iPad na iPod touchy.
Raha tsy miseho ity efijery ity dia tsindrio ny fitaovana izay nampifandray anay tamin'ny Mac hita eo amin'ny tsanganana ankavia.
Manaraka, hanamarina fa isika no tompon'ny iPhone, iPad, na iPod touch izay tiantsika handika ny vaovao, dia hanasa antsika hiditra ny hanalana ny hitsoka ao fehezan-dalàna ny iOS fitaovana.
Raha manontany anay ianao raha tianay matokia izany ekipa izany. Amin'ity fanontaniana ity dia mamaly izahay amin'ny fipihana ny Trust.
Ny dingana manaraka dia ny safidio ny lahatahiry izay tiantsika hanafatra ny atiny avy amin'ny iPhone amin'ny alàlan'ny fipihana ny drop-down hita eo ankavanan'ny Import mankany:
Raha te-hitahiry ny sarinao amin'ny kapila mafy misaraka ianao fa tsy miantehitra amin'ny fampiharana Photos tsy mety ny Manafatra ny votoaty ao amin'ny Photo Library (safidy default) fa ho any amin'ny lahatahiry izay ananantsika ary afaka mandika mora foana amin'ny kapila mafy ivelany.
Farany, tsy maintsy misafidy ny sary sy horonan-tsary rehetra tiantsika isika. Raha mbola tsy nanao an'ity dingana ity izahay dia tsindrio eo Ampidiro ny sary vaovao rehetra.
Miankina amin'ny habaka manontolo ipetrahan'ny sary sy ny sary ananantsika amin'ny fitaovantsika, Ity dingana ity dia mety haka fotoana bebe kokoa na latsaka.
Raha efa antitra ny iPhone na Mac ary ny fampiharana Photos dia tsy manolotra antsika an'io endri-javatra io, na tsy te hampiasa an'io app io fotsiny ianao dia afaka mitodika any amin'ny app iFunbox.
iFunbox dia mamela antsika esory ny atiny rehetra voatahiry amin'ny fitaovanay toy ny mpikaroka rakitra. Mila mampifandray fotsiny ny iPhone, iPad na iPod touchy amin'ny Mac izahay, sokafy ny fampiharana amin'ny Mac ary, eo amin'ny tsanganana havia, miditra amin'ny menio Camera.
Ny safidy 3 nasehoko anao etsy ambony dia mety tsara mamindra sary sy sary marobe avy amin'ny fitaovana iOS/iPadOS mankany amin'ny Mac.
Na izany aza, raha tianao fotsiny mamindra sary vitsivitsy ary tsy te hampiasa ny iray amin'ireo fomba voalaza etsy ambony ireo ianao, ireto misy safidy roa hafa:
Na dia tsy manana toerana fitehirizana fifanarahana ao amin'ny iCloud aza izahay, Apple dia mamela anay hamindra sary sy horonan-tsary avy amin'ny iPhone, iPad na iPod touch mankany amin'ny Mac na fitaovana hafa. amin'ny alàlan'ny fiasa Mail Drop.
Io fiasa io dia mamela antsika mandefa rakitra lehibe amin'ny alàlan'ny fampiharana Mail ny fitaovana iOS. Saingy, raha tokony handefa azy ireo mivantana amin'ny alàlan'ny mailaka izy ireo, dia alefa any amin'ny Apple cloud ary mandeha ho azy, Apple dia handefa rohy hisintonana izany votoaty izany.
Ny rakitra rehetra zaraina amin'ny MailDrop azo alaina mandritra ny 30 andro. Mba hampiasana ity rafitra ity dia tsy maintsy manao izany amin'ny alàlan'ny kaonty mailaka izay nisoratra anarana ho Apple ID izahay.
Safidy tsara iray hafa handefasana sary sy horonan-tsary amin'ny Mac dia hita ao amin'ny serivisy fandefasana rakitra lehibe WeTransfer malaza. Miaraka amin'ny fampiharana azo ampiasaina amin'ny iOS, afaka mandefa antontan-taratasy, sary, horonan-tsary ary karazana rakitra hafa izahay miaraka amin'ny 2 GB ambony indrindra.
Rehefa nosokafanay ny fampiharana, Tsy mila fisoratana anarana, misafidy ny atiny tiana hozaraina izahay, ampidiro ny adiresy mailaka an'ny mpandray ary alefanay ny atiny.
Tahaka ny safidy Mail Drop, ity safidy ity koa miadana kokoa noho ireo safidy nasehoko etsy ambony.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » Ahoana no hamindra sary avy iPhone ho Mac
Navelanao ny "Image Capture" izay efa tonga manara-penitra amin'ny Mac rehetra ary miasa ho an'ny scanner ihany koa. Izany dia ho antsika izay mampifandray ny finday amin'ny Mac mba handoa vola.
Valiny an'i Vladimir
Salama, manararaotra ny lahatsoratra, rehefa mampifandray ny iPhone (12 pro max) amin'ny Imac (M1) aho, dia mijanona "mampiakatra ny sary hanafatra avy amin'ny ..." ary tsy misy entana. Hitako tao amin'ny internet hoe inona no manjo ny olona maro kokoa ary ny vahaolana omen'izy ireo dia ny mametraka izany amin'ny fiaramanidina, miala, miditra, mamerina azy amin'ny laoniny ... indraindray mandeha, indraindray tsy mandeha. Misy mahafantatra ny antony mahatonga izany sy ny vahaolana azo ampiharina kokoa? MISAOTRA
"Raha nanao fifanarahana toerana fitehirizana ao amin'ny iCloud Drive izahay" ary raha navitrika ny Photos ao amin'ny iCloud, satria tsy misy izy roa ...
Mamindra sary an'arivony amin'ny alàlan'ny AirDrop, ampahafantaro ahy ny fandehany…
Amin'ny fampiasana Photos, ny zavatra lojika hisorohana ny fahaverezan'ny kalitao dia ny "manondrana tsy misy fanovana" na zavatra toy izany. Saingy... manondrana azy ireo any aminao amin'ny alàlan'ny fanesorana ny daty nangalana azy ary mametraka zavatra ‍♂️ vaovao izay tsy fantatro hoe inona no noheverin'ny injeniera hamolavola an'izany (toa ny daty nampifanarahan'ny fampiharana Photos amin'ny Mac. ny sary - izay hazavaina farafaharatsiny ao amin'ny Apple Care-). Ny tiako tenenina dia tsy zaka.
Toa miverina amin'ny laoniny ny sasany amin'ireo fivarotana Apple UK